TERAKA NANDRITRA NY FIFIDIANANA
Fanadihadiana anatiny fotsiny ihany izay mifandraika amin’ny fitsipi-pifehezana no hatao amin’ireo polisy nahiana ho nahavanon-doza tany Maroantsetra.
NITENY NY VADIN’ILAY KANDIDA VOATIFITRA
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny vadin’ilay kandidà izay maty notifirina tany Tsaratanàna. Manahy mafy izy ireo fa mety havotsotra atsy ho atsy ilay kandidà hafa izay voarohirohy ho atidoha nikotrika ny famonoana.
Tavoahangy feno pipi atsipy eny amin’ny olona, olona afaka mitondra labiera sy toaka ary miteraka fahamamoana etsy sy eroa.
Teraka nandritry ny androm-pifidianana ho filoham-pirenena, tsy naka lavitra ny ray aman-dreniny tamin’ny fametrahana anarana.
Nantsoin’izy ireo hoe Fifidianantsoa ary ny zanany vavy kely izay teraka tao amin’ny hopitaly Analankinina-Toamasina, omaly. Hafakely ilay anarana ary efa afaka nody omaly ihany izy sy ny reniny rehefa samy salama tsara ka nomen’ny hopitaly alàlana momba izany.
Nirotahan’ny olona ny mpaka hevitry ny olona na koa ireo mpanao “sondage” ireo olona izay avy nifidy tao Toamasina. Avy amin’ny orinasa izay tsy fantam-pihaviana “Madagascar Exit Poll” izy ireo. Tao amin’ny EPP Ankirihiry dia tovovavy efatra no nametraka fanontaniana hafahafa tamin’ny olona ary voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana niaro azy ireo raha tsy izany dia matin’ny olona izay efa nitangorona teo. Torak’izany koa tao amin’ny biraom-pifidianana Ambalamanasy sy Morarano.
NAATO KELY ALOHA
Voatery najanona nandritry ny adiny iray ny fifidiana tao amin’ny kaominina Befasy, Mahasoa-Morondava. Ny anton’izany dia satria nisy fanafihan-dahalo vao maraina izay nitranga teo amin’ny 300 metatra miala teo amin’ny biraom-pifidianana. Niditra an-tsehatra ny zandary ary dia raikitra ny fanenjehana ireo dahalo mitam-basy. Ny fifidianana kosa dia afaka nitohy ihany rehefa niverina ny filaminana tao an-toerana.
Marobe ny tsy fahatomombanana izay nitranga teto an-drenivohitra omaly. Betsaka ny nahazo rakin-tsary ireo olona izay nifidy indroa ary mazava hoazy fa endriky ny hala-bato izany, tany Andoharanofotsy no tena hita mivaingana. Misy koa ireo izay afaka nifidy ihany na dia diso biraom-pifidianana aza, toa izay nitranga tetsy 67ha andrefana. Tsy hitan’ny filohan’ny biraom-pifidianana izay natao ary satria efa voalatsaka ny vato.
Vola sandoka mitentina roa alina ariary no naparitaka teo amin’ny manodidina ny birao fandatsaham-bato maromaro tao Toliara omaly. Izany dia entina hanambatambazana ireo olona izay hifidy mba handatsaka ny vaton’ny kandidà iray izay tsy hotononina anarana. Efa hatramin’ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra no niasa ireo vola sandoka ary omaly dia mbola tonga ihany ireo olon-dratsy nampirantiranty izany ary nanao ilay fomba ratsy dia ny mividy ny safidin’ny olona.
Lozam-pifamoivoizana roa karazana ary samy nahafatesana olona no nitranga omaly teny amin’ny lalam-pirenena. Fiara izay niala avy any Antsiranana no nivadika tetsy Ankazobe ary olona telo no maty tsy tsa-drano. Fiara sprinter izay taxi-brousse indray io namono olona io. Ny faharoa indray dia tetsy Ampasamanantongotra, teo Miarinarivo Itasy izany. Nandeha mafy loatra ny fiara ary nivoaka ny lalana ka nahafaty ramatoa 43 taona sy olona maro naratra mafy.
Nosamborin’ny zandary ireo mpanao fanadihadiana avy amin’ny Madagasar Exit Poll tetsy Ivato omaly. Nahasorena ny olona ny fanontaniana napetrak’ireo mpanao fanadihadian’io sampana tsy fantam-pihaviana io. Saika nirotahan’ny olona koa ka teo no voatery niditra an-tsehatra ny zandary ary nitondra ireo olona efatra tany amin’ny foiben’izy ireo eny Ankadilalana.